देउवाकाे भूमिका नेकपामा तेस्रो वरियताको सभापति ! - नेपालबहस
♦ सञ्चिता पौड्याल
९ माघ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल भनेर चिनिने नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो कार्यशैली हेर्दा लाग्दैन, यसको विरासत लोकतन्त्रको पर्यावाचीको रुपमा नेपाली समाजमा स्थापित त्यस्तो थियो भनेर ।
नेपाली कांग्रेसले यो मुलुकका लागि के ग¥यो बिगतमा ? पछिल्लो पुस्तालाई त नेपाली कांग्रेसले गरेको योगदानबारे कुनै जानकारी नै छैन । किनभने कांग्रेसले गरेको राम्रो कामबारे थाहा पाउने अवसर नै प्राप्त भएन । युवा पुस्तालाई आकर्षण गर्ने कुनै गतिविधि गरेको भए पो जानकार हुन्थे । त्यसैले नयाँ पुस्ताका युवाहरुलाई नेपाली कांग्रेसको गौरवगाथा पत्यारिलो लाग्ने आधार नै छैन ।
तर बीपी कोइरालाको पुस्तालाई नजिकबाट नियाल्न भ्याउनेका लागि भने कांग्रेस ज्वालामुखी नै हो । नेपाललाई लोकतान्त्रिक युगमा लैजाने अभियानलाई कांग्रेसले पटक–पटक नेतृत्व प्रदान गरेको हो । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाई नेपालमा सदासर्वदा नेपाली कांग्रेसले नै गरेको छ, चाहे त्यो ००७ सालमा राणा विरुद्ध होस् वा ०१७ पछि ०४६ सम्म पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा नै किन नहोस् । नेपाली कांग्रेस नै नेपालको प्रजातन्त्रको अगुवा र रक्षक बन्यो र रह्यो ।
०५२ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाले सत्ताका लागि खेलेका खेल नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा घृणित कालखण्ड बन्यो । सूरा, सुन्दरीदेखि पजेरो संस्कृति भित्र्याउने अरु कोही हैन नेपाली राजनीतिमा मात्र देउवा हुन् । सत्ता राजनीति भन्दा दायाँबायाँ गर्न नसक्ने उनको प्रवृत्ति र शैलीले नेपाली कांग्रेसलाई आजको दुरावस्थामा पु¥याई दिएको छ ।
यो क्रम ०६२/०६३ सम्म पनि कायमै रह्यो । माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याएर यो देशबाट राजतन्त्रको समूल नष्ट गरी गणतान्त्रिक नेपाल स्थापना गर्न समेत नेपाली कांग्रेसले अगुवाई गरेको हो । बीपीका कान्छा भाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आधुनिक नेपाल निर्माणमा ठूलै जोखिम उठाएर प्रजातन्त्रको पहरेदारी गरेका हुन् । त्यति बेलासम्मको इतिहासका साक्षी धेरै नेपालीलाई कांग्रेसको गौरवगाथा थाहा छ नै । तर त्यसपछि कांग्रेसको नेतृत्व तहमा पुगेकाहरुले त्यसलाई जगर्ना गर्न सकेनन् ।
नेता कहलिएकाहरु फगत सम्पत्ति र सत्ता राजनीति केन्द्रित भइदिए । जसले गर्दा नेपाल र नेपालीको भविष्य निर्माणमा नेपाली कांग्रेसले गरेको बलिदानी र योगदान आजका पुस्ताका लागि केवल एकादेशको कथा बन्ने गरेको छ ।
खासगरी नेपाली कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवाको उदय हुने वित्तिकै धेरै बेथितिले जन्म लियो । ०५२ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाले सत्ताका लागि खेलेका खेल नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा घृणित कालखण्ड बन्यो । सूरा, सुन्दरीदेखि पजेरो संस्कृति भित्र्याउने अरु कोही हैन नेपाली राजनीतिमा मात्र देउवा हुन् । सत्ता राजनीति भन्दा दायाँबायाँ गर्न नसक्ने उनको प्रवृत्ति र शैलीले नेपाली कांग्रेसलाई आजको दुरावस्थामा पु¥याई दिएको छ ।
नत्र कांग्रेसका पालामा नियुक्त भएका सबैजना राजदूत आज फिर्ता भइसक्दा पनि देउवाकी सासु प्रतिभा राणा भने ओली सरकारको सबैभन्दा विश्वास पात्र कसरी भइन् । जापान जस्तो महत्वपूर्ण राष्ट्रको राजदूत रहेकी प्रतिभा राणा आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्ने भाग्यमानी त्यसै भएकी होइनन्, देउवाको चाहनाले मात्र हो ।
नेपाली जनताले पटक–पटक बहुमत दिएको नेपाली कांग्रेसमा देउवाकाल सुरु भएपछिको अवस्था टिढ लाग्दो छ । अहिले संसद्मा कांग्रेसको संख्यात्मक उपस्थिति लज्जास्पद छ । यस्तो जनमत प्राप्त गर्दा समेत देउवाले नैतिकता भन्ने शव्दलाई कहिल्यै स्मरण गरेनन् । चुनावमा भएको पराजयको जिम्मेवारी कहिल्यै लिएनन् । बरु संसदीय दलको नेतामा पनि आफैं बिराजमान भए । त्यसको कारण थियो – उनको चरम सत्तामोह ।
प्रतिपक्षी हैसियतमा पुग्दा देउवा आक्रमक होलान् भन्ने आम मानिसले अनुमान गरेका हुन् । कांग्रेसको गौरवशाली इतिहासले पनि त्यो विरासत थाम्छ भन्ने धारणा आम मानिसमा हुनु स्वभाविक थियो । तर देउवा कार्यकालमा त्यो संभव भएन । बरु उनी जसरी हुन्छ आफू र आफ्नो गुटको संरक्षण गर्न प्रतिपक्षीय भूमिका नै त्याग्न तत्पर देखिएका छन् । नत्र कांग्रेसका पालामा नियुक्त भएका सबैजना राजदूत आज फिर्ता भइसक्दा पनि देउवाकी सासु प्रतिभा राणा भने ओली सरकारको सबैभन्दा विश्वास पात्र कसरी भइन् । जापान जस्तो महत्वपूर्ण राष्ट्रको राजदूत रहेकी प्रतिभा राणा आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्ने भाग्यमानी त्यसै भएकी होइनन्, देउवाको चाहनाले मात्र हो ।
बिगतमा बी पी, गणेशमान, सुवर्ण शमशेर, कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता नेतालाई पञ्चायतले यस्ता कति अफर दिएको होला ? पञ्चायतलाई स्वीकारेको भए बीपी आजीवन प्रधानमन्त्री हुनसक्थे । सुवर्णलाई के कमी थियो ? गणेशमानले चाहेका भए के पाउने थिएनन् ?
खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकार सर्वसत्तावादी भयो भनेर सर्वत्र विरोध छ । नागरिक समाज पूरै विरोधमा छ । भर्खरै मात्र नेकपाले हत्या आरोपी अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनायो । लोकतन्त्र र कानूनी राज्यको पक्षका अटल र अविचलित रहेको इतिहास बोकेको कांग्रेसले त्यसलाई चुनौती दिएन । संसदीय दलले सापकोटा विरुद्ध उम्मेदवारी समेत दिने आँट गरेन । बरु रिक्त उपसभामुखका लागि चित्रलेखा यादवको नाममा भिख माग्ने काम गरेको छ । त्यो पनि पाँच हजार नेपाली मारेको स्वीकारोक्ति दिने पुष्पकमल दाहालको दैलोमा पुगेर उपसभामुख माग्ने लाचार कांग्रेसी चरित्र उदांगो भएको छ ।
देउवा र रामचन्द्र पौडेल जस्ता नेता अहिले सत्ताको लाचार छायाँ बनेका छन् । पौडेल आफैं प्रचण्डको दैलो चहारेर एउटा उपसभामुख दिनु प¥यो भन्दै भिक्षा माग्न जानु कांग्रेसका लागि मरे तुल्य हो । बिगतमा बी पी, गणेशमान, सुवर्ण शमशेर, कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता नेतालाई पञ्चायतले यस्ता कति अफर दिएको होला ? पञ्चायतलाई स्वीकारेको भए बीपी आजीवन प्रधानमन्त्री हुनसक्थे । सुवर्णलाई के कमी थियो ? गणेशमानले चाहेका भए के पाउने थिएनन् ? यस्तो नैतिकता र आचरण भएका नेता भएकैले कांग्रेसप्रति सबैको विश्वास र भरोशा थियो । तर अहिले देउवा पौडेलले सबै स्खलित बनाई दिएका छन् ।
यही सोच र शैलीले कांग्रेस अघि बढ्दै जाने हो भने युवापुस्ताले अहिलेसम्म नाम चाहिं सुनेका होलान्, भोलिको पुस्ताले त इतिहासकै पाना पल्टाउँदा मात्र नेपाली कांग्रेस भन्ने पार्टी रहेछ भन्ने जान्नु पर्ने हुन्छ । देउवाको कार्यशैली हेर्दा विस्तारै त्यही गतिमा पार्टी अघि बढ्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
कतिपयले त ठट्टै गर्दा किन नहोस् भन्ने गरेका छन– अब देउवाले कुनै पनि बेला नेकपामा तेस्रो वरियताको सभापति पाउने वचन पाए भने कांग्रेस नै बिलय गरिदिने छन् । मजाक नै किन नहोस् विषय ज्यादै संवेदशनशील छ, त्यही कुरा कांग्रेसमा हिजोका नेतालाई नभनिने तर देउवालाई चाहिं भन्ने, केही कारण त अवश्य पनि छ । हावा नचली पात हल्लँदैन भने जस्तो । कांग्रेसले अब आफूलाई समयानुकल बनाउन सकेन भने साँच्चै इतिहास गर्वमा कांग्रेस बेपत्ता हुन सक्छ ।
अघिल्लो लेखस्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा मन्थली नगरपालिकाको सक्रियता
अर्को लेखस्याङ्जा समाजद्धारा बेल्जियममा भ्रमण बर्षको प्रचारप्रसार
अनशनकारीको माग पूरा गर्न कांग्रेसको आग्रह
राजीनामा देउ ओली
सभापति देउवाद्वारा महाशिवरात्रीको शुभकामना
सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा कांग्रेसद्वारा प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध
कांग्रेसले बाँस्कोटाको राजीनामा माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्ने
कांग्रेसद्धारा राष्ट्रियसभा बैठक अवरुद्ध, बास्कोटालाई बर्खास्त गर्न माग